Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 33)
Seddex waji ayaa waji ka waji: Nexus 6P vs Galaxy Note 5 vs Xperia Z5 Premium
Waxaan u wajahnay Nexus 6P, Galaxy Note 5 iyo Xperia Z5 Premium waji ka waji isbarbardhigan oo ah seddex mobiles oo wax wadaagaan: cabirkooda.
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato daaqadda weyn ee Nexus 6P
Maanta waxaan sharraxeynaa sababta daaqadda weyn ee Nexus 6P
5 taleefannada casriga ah oo leh astaamo qariib ah oo ka dhigaya kuwo gaar ah
Haddii aad ka mid tahay kuwa raadinaya taleefannada casriga ah oo leh astaamo gaar ah oo aadan ku jirin meesha ugu sarreysa suuqa, maanta waxaan ku tusi doonaa in yar.
Dukaanka Google wuxuu horey u haystay Chromecast 2 iyo Chromecast Audio oo lagu heli karo € 39
Hadda waxaa lagu heli karaa € 39 oo ku jira Google Store labadaba Chromecast 2 cusub iyo Chromecast Audio. Laba qalab oo loogu talagalay maqalka iyo waxyaabo badan oo warbaahin ah.
Huawei Nexus 6P hadda waa rasmi: shaashadda 5,7,, jirka biraha ah iyo saddex nooc oo 32/64 / 128GB ah oo loogu talagalay qiimaha laga bilaabayo oo ah $ 499
Nexus 6P waa Google dhamaadka sanadkaan leh kamarad qaadi doonta sawirro tayo sare leh iyo seddex nooc oo lagu keydin doono: 32,64 iyo 128GB
Nexus 5X waa halkaan: 5,2 ″ shaashad, Snapdragon 808 hexa-core iyo 16 / 32GB $ 379/429
Nexus 5X ayaa hadda laga soo bandhigay magaalada San Francisco labo nooc oo ah 16 / 32GB oo u dhiganta 379/429 $ € waxayna la timid qeexitaanno aad u xiiso badan.
Sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah ee HTC One A9 ayaa muuqda
Illaa iyo hadda waxaan aragnay sawirro la soo rogay oo ah terminalka cusub ee HTC, laakiin haddana waxaan hadda aragnaa sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah ee HTC One A9.
Wax kasta oo loo yaqaan 'Tablet Teclast X10 HD 3G' ayaa na siiya, guud ahaan DualBoot oo kaliya in ka badan 200 euro
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegis iyo falanqeyn dhameystiran Teclast X10 HD 3G Tablet oo leh DualBoot Windows 8.1 iyo nidaamka Android 4.4.4 boot si aad ugu raaxeysato waxa ugu fiican labada adduun.
Chromecast 2, xallinta sare, waxqabadka wanaagsan iyo isku qiimo
Google waxay ku soo bandhigi kartaa shirka maanta, Chromecast cusub 2. Qalabkani wuxuu yeelan lahaa qaraar dheeri ah, waxqabad qiimihiisuna wuxuu noqon lahaa 35 euro
Dib-u-eegista iyo falanqaynta Leagoo Elite 1, oo ah terminaal weyn oo qiimo lagu qosli karo ah
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib-u-eegista iyo falanqaynta dhammaystiran ee Leagoo Elite 1, oo ah terminaal loogu talagalay kaliya 160 Euros wuxuu na siinayaa qeexitaanno farsamo oo ah Android-dhamaadka sare.
Elephone Vowney, terminalka ugu awoodda badan soo saaraha Shiinaha
Elephone waa mid ka mid ah soo saarayaasha Shiinaha ee soo jiita dareenka ugu badan. Hadda waxay soo bandhigeysaa terminalkeeda Elephone Vowney, oo ah terminalkeeda ugu awoodda badan.
Sawirro dheeri ah iyo inta hartay ee qeexitaannada Nexus 5X ee ku imaan doona qiimo dhan $ 379
$ 379 waa qiimaha uu ku imaan doono Nexus 5X, terminal leh 2 GB oo RAM ah iyo in waqtigan uusan yeelan doonin booska microSD.
Elephone Ele Watch, kani waa smartwatch-ka Shiinaha ee wata 'Android Wear'
Elephone ayaa gacmaheeda ku jirta maxaa laga yaabaa inuu noqon karo kii ugu horreeyay ee smartwatch-ka Shiinaha ee wata 'Android Wear'. Elephone Ele Watch waa la dusay waana arki karnaa sida ay u egtahay.
HTC One A9 waxaa lagu sifeeyay midabbo kala duwan wuxuuna aad ugu egyahay iPhone 6
HTC One A9 waa terminaalka ay HTC ku rajo weyn tahay. Hadda waxaan aragnaa in lagu sifeeyey dhammaan noocyada kala duwan ee midabada iyo u ekaanshaha iPhone 6.
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa Gear VR muraayado xaqiiqda dalwaddii ah $ 99
Samsung Gear VR waa aaladda xaqiiqada dalwaddii ee la heli karo iibinta bisha Noofambar qiimaha $ 99.
Daadinta kale waxay muujineysaa noocyada midabada ee LG Nexus 5X
LG Nexus 5X wuxuu imaan doonaa Carbon Black, Ice Blue iyo Quartz White shan maalmood gudahood markii uu adduunka oo dhan ka bilaabmayo.
Samsung Galaxy A8 ayaa qiimo waali ah ku leh Yurub Soo ogow waxa socda!
La'aanta boosteejooyinka Yurub waxay ka dhigeysaa iibiyeyaal badan sharad si ay ugu iibiyaan qiimo aad u sarreeya. Nooca ugu dambeeya ee qoraalka lagu qorayo waa Galaxy A8.
Nexus 6P waxaa laga heli doonaa Caddaan, Madow, Qalin iyo Dahab
Mustaqbalka Huawei terminal ee Google, Nexus 6P, waxaa lagu heli doonaa dhowr midab oo kala duwan sida Caddaan, Madow, Silver iyo Dahab.
Meizu wuxuu si rasmi ah u soo bandhigayaa Meizu Pro 5
Shirkadda Shiinaha ayaa ka faa'iideysatay maalinta maanta inay soo bandhigto terminalkeeda cusub, Meizu Pro 5.
Huawei Nexus 6P iyo nashqadda sanduuqa ay leedahay sida kan Nexus 5X ayaa soo ifaya
Maanta waxaan ognahay naqshadda Huawei Nexus 6P iyo sanduuqyada ay ku wada noolaan doonaan iyo Nexus 5X oo la soo bandhigi doono 29-ka Sebtember.
Xiaomi Mi 4C horeyba waa rasmi oo kaliya wuxuu ku kacayaa 205 doolar
Xiaomi waxay soo bandhigtay intii lagu gudajiray kalfadhigii maanta qalab cusub, Xiaomi Mi 4C, oo ah terminal dhamaadka-sare ah qiimo jaban.
Xiaomi Mi 4C ayaa la soo bandhigi doonaa maanta
Xiaomi wuxuu soo bandhigi doonaa maanta waxa noqon doona terminal-keeda cusub, Xiaomi Mi 4C. Qalab heer sare ah laakiin qiimo jaban.
Samsung Galaxy S7 ayaa mar labaad lagu arkay Snapdragon 820 iyo qaab dhismeedka unibody magnesium?
Xanta cusubi waxay soo jeedinaysaa in Samsung Galaxy S7 cusub uu isku dari doono processor Qualcomm Snapdragon 820, marka lagu daro jirka unibody magnesium
Oneplus X, the Oneplus 2 mini oo imaan doona bisha Oktoobar oo ku kici doonta qiyaastii 220 Euros
Sawirada uguhoreeya waxaa lagu sifeeyay waxa uu noqon karo midka cusub ee loo yaqaan 'Oneplus 2 Mini' kaas oo ku imaan lahaa qiime gaaraya ilaa 220 euro.
LG Class ayaa lagu dhawaaqay dhumucdiisuna tahay 7,4 milimitir iyo kamarad hore oo 8MP ah
Kaamirada hore ee fasalka cusub ee LG Class waxay si sax ah ula mid tahay LG G4, sidaa darteed waxaan wajaheynaa taleefan casri ah oo qaas ah oo loogu talagalay sawirrada iswada.
Sawirada Microsoft band 2 ee xiran ee shaashadda qalooca ayaa soo daadanaya
Microsoft Band 2 waa sharadka kuwa ka socda Redmond si ay ula socdaan isbeddelladan la gashado adduunka oo dhan iyada oo gaar ahaan ay tahay shaashad qalloocan
Kani waa Meizu Pro 5
Dhowr maalmood ka dib soo bandhigideeda rasmiga ah, Meizu Pro 5 waxaa lagu arki karaa dhowr sawir.
Lenovo Lemon X, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee shirkadda Motorola ugu talagasho Lenovo
Sawiradii ugu horreeyay ee loo maleynayay inay la egtahay terminaalka loogu talagalay shirkadda Motorola ee Lenovo, Lemon X, ayaa la sifeeyey.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato 7-da cusub ee loo yaqaan 'Amazon Fire tablet', qeexitaanno farsamo, qiimaha iyo iskuxirka tooska ah ee loogu talagalay iibsashadeeda kaliya 59,99 euro
Maanta waxaan ku tusineynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato 7-da cusub ee "Amazon Fire Tablet".
Jiilka labaad ee Chromecast wuxuu ku imaan doonaa iyadoo la wanaajiyay Wi-Fi iyo habka loo maqli karo oo deg deg ah
Chromecast wuxuu ku siganayaa in lagu soo bandhigo Wi-Fi oo hagaagsan, hab gaar ah oo si dhakhso leh loogu ciyaaro iyo maxaa naqshad cusub noqon lahaa.
Xperia ma diidaan biyaha: milicsiga biyaha diidan ee adduunka guurguura
Qaar badan oo ka mid ah Sony Xperia ayaa lagu iibiyaa tayada u adkaysiga biyaha, laakiin shirkaddu waxay caddeynaysaa in laga doorbido in aan la quusin, gaar ahaan badda.
Tablet-ka cusub ee dabka Amazon, oo ay ku jiraan mid qiimahiisu yahay € 59
Amazon waxay soo bandhigtay Tablet-ka cusub ee dabka Amazon. Qalabkani wuxuu noqon doonaa mid aad u jaban maadaama uu ku kici doono oo keliya € 59.
Dib u eeg Hisense King Kong G610
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib-u-eegista iyo falanqaynta Hisense King Kong G610, oo ah terminaal cusub oo android ah oo la furay isla bishan July 2015 isla markaana aan hadda ka iibsan karno Telefoonka Guriga.
AmazFit, Kani waa jijin cusub oo Xiaomi ah
Dhamaanteen waxaan rajeyneynaa cusbooneysiinta labaad ee Xiaomi Mi Band jijin smart, laakiin si kastaba ha noqotee, Xiaomi waxay diyaarisay jijin kale oo caqli badan, AmazFit.
Lenovo Vibe S1, oo ah taleefan loogu talagalay dadka jecel sawir-gacmeedka
Waxaan ku tijaabinay Lenovo Vibe S1, taleefanka cusub ee Lenovo oo leh kamarad hore oo labalaaban si aan u qaadno sawirada ugu fiican
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Lenovo Phab Plus, Lenovo's phablet cusub oo u muuqda shaashadda cajiibka ah ee 6.8-inch iyo tayada dhammeystiran
Dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga ka dib isku dayga Samsung Gear S2, smartwatch oo u taagan naqshadeynta iyo xaqiiqda isticmaalka Tizen.
Processor Acer deca-core Gamer qiimaha casriga ah iyo noocyada
Waxaan u sharraxeynaa dhammaan wararka ku saabsan taleefannada casriga ah ee loogu talagalay khaas ahaan cayaartoyda. Acer Predator 6 wuxuu ballan-qaadayaa inuu wax badan ka badnaan doono taleefannada casriga ah.
Meizu Pro 5 wuxuu garaacaa Galaxy Note 5 Geekbench
Meizu Pro 5 ee soo socota wuxuu ka fiicnaan doonaa Galaxy Note 5 heerarka.
Galaxy S7 waxaa lagu arkaa Exynos 8890 oo ah jaangooyo cusub
Galaxy S7 oo loo malaynayay ayaa mar kale lagu arkay imtixaan bartilmaameed kaas oo lagu muujiyay processor Exynos 8890.
LG G pad II 10.1, dareenka ugu horreeya kadib tijaabinta kiniinka cusub ee LG
Falanqaynta fiidiyowga oo buuxa ee LG G Pad II 10.1, kiniiniga cusub ee LG ee u taagan dhammaystirka iyo qiimaha la hagaajiyay: wuxuu ku kacayaa wax ka yar 600 euro
ZTE Axon Elite, aragtiyaha ugu horreeya ee fiidiyowga
Waxaan ku falanqeyneynaa 'ZTE Axon Elite' fiidiyowga, adiga oo ku tusinaya dhammaan sirta ku saabsan calanka cusub ee 'ZTE'.
Isbarbardhiga Moto X Play VS Oneplus 2 iyo tijaabada xawaaraha
Isbarbardhiga iyo xawaaraha tijaabada Moto X Play VS Oneplus 2.
Sawirada Xiaomi Mi Note 2 ee soo socda ayaa xaday
Qaar ka mid ah sawirrada xaday ee Xiaomi Mi note 2 ee soo socda ayaa muujinaya sida qalabka mustaqbalka ee soo saaraha caanka ah ee Shiinaha u ekaan doono.
Nexus Protect: Google wuxuu bilaabi karaa barnaamijkiisa dammaanad qaadka ee Nexus
Google ayaa dhawaan laga yaabaa inay bilawdo barnaamij damaanad qaad ah oo loogu talagalay qalabka ku kaydsan Google Store, laguna magacaabo Nexus Protect.
Dhibaatooyinka isku dhejinta Android Wear ee casrigaaga?
Miyaadan helin ogeysiisyo ku saabsan qalabka loo yaqaan 'Android Wear'? Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loogu xaliyo dhibaatadan qaab fudud oo aad u dhaqso badan.
OnePlus wuxuu diyaariyaa wax raaxo leh
OnePlus waxay sii deysay muuqaal xayeysiis ah oo ay ku shaacineyso soo dhaweyn yar oo raaxo ah. Kee noqon karaa?
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Moto X Play
Dib u eegista iyo falanqeynta Moto X Play halkaasoo aan ku tusineyno wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato Terminalkan cusub ee Motorola
Waxaan tijaabinay Alcatel OneTouch Xess, oo ah kiniin cusub oo 17-inch ah oo u soo bixi doona shaqadiisa iyo qaabeynta.
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyow sida qaabka SteadyShot ee Sony Xperia Z5 u shaqeeyo. Habka kuu ogolaanaya inaad xasiliso muuqaalka fiidiyowga qaab yaab leh.
Galaxy S7 oo leh Snapdragon 820? Tan waxaa lagu muujiyey halbeeg
Jiilka soo socda ee calanka Samsung, Galaxy S7, ayaa ka muuqda halbeeg. Qalabkani wuxuu u muuqdaa hoosta Snapdragon 820.
Isbarbardhig: Apple iPhone 6s Plus VS LG G4
Waxaan sii wadaynaa isbarbardhigyadeena gaarka ah si aan ula kulanno markan iPhone 6S Plus vs LG G4.
Ricoh Theta S, kani waa kamaradda cusub ee Ricoh 360
Ricoh Theta S waa aalad xiise leh oo aan ku sameyn karno fiidiyowyo 360-degree ah oo aan ugu diri karno taleefanka
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Lenovo Yoga Tab 3 Pro kiniin u taagan pirojektarkeeda pico iyo dhammeystirka tayada.
Lenovo Vibe P1, waxaan tijaabinay calanka cusub ee Lenovo
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Lenovo Vibe P1, taleefan cusub oo Lenovo ah oo u taagan 5.000 batroolka Mah iyo naqshad aad u fiican.
Samsung Galaxy Note 5, waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Samsung Galaxy Note 5, xubin cusub oo ka tirsan Samsung Note kala duwan si ay ula tartamaan iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus.
Isbarbardhig: Apple iPhone 6s Plus VS Sony Xperia Z5 Premium
IPhone 6s Plus hadda waa rasmi. Maanta waxaan sameyneynaa isbarbardhig u dhexeeya shirkadda Apple, iPhone 6s Plus vs Sony Xperia Z5 Premium.
Sony waxay ka digeysaa in qalabkeeda quusin karin wax badan
Dhamaan xayeysiisyadaas oo ay jilaayaashu u adeegsadeen Sony Xperia inay ku quusiyaan barkad dhexdeeda, hadda waxay kugula talineysaa inaadan qalabkooda ku isticmaalin biyaha.
Samsung Galaxy S6 edge + vs iPhone 6s Plus, yaa u kici doona carshiga suuqa xayawaanka?
Waxaan sameyneynaa isbarbardhig dhameystiran oo udhaxeeya Samsung Galaxy S6 edge + iyo iPhone 6s Plus, laba titan oo diyaar u ah inay u dagaallamaan inay kursiga u fuulaan,
Isbarbardhig: Apple iPhone 6s Plus VS Samsung Galaxy Note 5
Shalay iPhone 6s Plus cusub ayaa la bilaabay maantana waxaan waji ka waji u wajahaynaa isbarbardhig si aan u aragno sida ugu fiican ee Android iyo kuwa ugu fiican ee io loo keeno iyaga
Samsung Galaxy S7, markii ugu horeysay warar xan ah oo ku saabsan soo bandhigiddeeda iyo qeexitaan farsamo
Maanta waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo lagu xamanayay Samsung Galaxy S7, qeexitaanno farsamo oo suurtagal ah iyo soo bandhig rasmi ah.
[UPDATED] Waxaad hadda ka iibsan kartaa 2 Gb Xiaomi Redmi Note 32 oo ah 158 Euros, dalab xaddidan oo ku saabsan cutubyada 100 ee ugu horreeya
Waxaan horeyba u iibsan karnaa Xiaomi Redmi Note 2 qiimo aan laga adkaan karin oo ka yar 190 euro oo loogu talagalay qaabka 32 Gb ee keydinta gudaha iyo ka hooseeya 160 euro ee 16 Gb
Wejiga hore ee LG Nexus 5 cusub ayaa lagu sifeeyay sawir
Waxaan haynaa dhowr sawir oo ah waxa noqon doona LG Nexus 5 cusub oo aan rajeyneyno waxayna noqon doontaa jiilkii seddexaad tan iyo markii Nexus 4 soo baxday.
Alcatel Onetouch Go Watch, waxaan tijaabinay smartwatch-ka cusub ee Alcatel
Marka horeba, lakabka ilaalinta iyo suunka saacaddu way kala duwanaan karaan, sidaa darteed Alcatel OneTouch GO Watch wuxuu noqon doonaa aalad leh habeyn weyn. Dabcan, alcatel-onetouch-go-watch-video ayaa loo diyaariyey inay noqdaan kuwo adkaysi leh, oo aan qurux badnayn.
Nexus wuxuu bilaabaa inuu helo cusbooneysiin bille ah
Qalabka Nexus ee Google ayaa bilaabaya inay helaan casriyeyntii ugu horreysay ee bille ah si ay ula tartamaan Stagefright.
Sony Xperia Z5 Compact, tijaabinta soo socota ee iPhone 6s
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Sony Xperia Z5 Compact, taleefanka cusub ee Sony ee loogu talagalay inuu la tartamo Apple iyo iPhone 6s.
Moto 360, kuwani waa dareenkeena ka dib markii aan ku tijaabinay IFA 2015
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Moto 360 cusub, oo ah nooc ka sii nadiifsan qaabkii ugu horreeyay taasna waxay sii wadaa inay ku sharraxdo Android Wear oo ah nidaamkeeda hawlgalka.
Amazon waxay soo saari kartaa kiniin dhan € 50
Shirkadaha caalamiga ah ee Amazon ayaa bilaabi kara kumbuyuutar smart 6-inch ah oo ka yar € 50.
Nexus-ka cusub ee 2015-ka ayaa la iibin karaa bisha soo socota ee Oktoobar 13
Google ayaa la filayaa inay soo bandhigto Nexus 2015 ee soo socota bisha Sebtember 29 waxaana laga yaabaa in la iibiyo boosteejooyinkan Oktoobar 13.
Sony waxay ku sii socotaa waxyaabo la yaab leh, Xperia Z5 Ultra sanadka soo socda
Sannadka soo socda Sony Xperia Z5 Ultra wuxuu la muuqan karaa shaashad 6,44-inch ah, wax la mid ah nooca 2013.
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Acer Predator 8, kiniin cusub oo Acer ah oo loogu talagalay dhagaystayaasha gamer taasina way ka farxin doontaa kuwa ugu badan ee ciyaara
HTC waxay soo bandhigeysaa casriga cusub, HTC Desire 728
Soo saaraha Shiinaha wuxuu ku soo bandhigay dalkiisa hooyo HTC Desire cusub oo ah 728, oo ah 5-inch oo sideed-koronto ah oo loo yaqaan Android.
Sawiradii ugu horreeyay ee Nokia C1 ayaa muuqda
Waxaan horeyba uheynay labada sawir ee ugu horeysa waxa uu noqon doono Nokia C1 telefoonka daahirka ah ee Android oo leh shaashad 5-inch ah iyo Intel Atom chip
Sony Xperia Z5, rayi ugu horeysay
Waxaan fulineynaa falanqeyn fiidiyoow ah oo ku saabsan Sony Xperia Z5 halkaas oo aan ku tusinayno dhammaan sirta shaqooyinka cusub ee Sony
Lenovo Vibe X3 ayaa si buuxda loo soo bandhigay
Lenovo Vibe X3 waa mobilada Android-ka ah oo leh shaashad 5,5-inji ah, lix-geesood ah Snapdragon 808 chip iyo 3GB oo RAM ah.
Samsung Galaxy Tab S2, waxaan tijaabinay nooca 9.7-inji ah
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Samsung Galaxy Tab S2, kiniinka cusub ee Samsung oo leh dareeraha sawirka faraha iyo dhammaadka tayada.
Samsung Galaxy S6 Edge +, kuwani waa kuwa ugu horreeya ee aan aragno
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Samsung Galaxy S6 Edge +, calaamadda cusub ee kala duwanaanta Edge oo u taagan dhammaystirkeeda iyo cabirka shaashadda.
Huawei G8, aragtiyaha ugu horreeya ee fiidiyowga
Waxaan kuu soo qaadaneynaa fiidiyoow aan ku falanqeyneyno Huawei G8, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee Huawei oo u muuqda mid dareemaya sawirka faraha iyo dhammaadka qiimaha
Sony Xperia Z5 Premium, waxaan ku tijaabinay taleefankii ugu horeeyay shaashad 4K ah
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Sony Xperia Z5 Premium, astaanta cusub ee shirkadda Japan ee u muuqata muuqaalkeeda cajiibka ah ee 4K
Kiiboodhka LG Rolly, waxaan tijaabinay kumbuyuutarka LG-ga ee wireless-ka ah iyo duubista
Waxaan tijaabinay LG Rolly, kumbuyuutarka kumbuyuutarka cusub ee LG kaas oo bixiya madax-bannaanida cajiibka ah. Miyaad seegaysaa?
Huawei Mate S, aragtiyaha ugu horreeya ee fiidiyowga
Waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn fiidiyoow ah oo ku saabsan Huawei Mate S, shirkadda cusub ee Huawei ee noocyada kala duwan. Miyuu awoodi doonaa inuu la socdo Galaxy Note 5 ama Edge +?
Kani waa nooca cad ee Nexus 2015
Maalmo kooban ayaa ka haray soo bandhigida rasmiga ah ee qalabka soo socda ee Nexus 2015 maantana waxaan aragnaa daadasho cusub oo ah nooca cad ee Nexus soo socda.
Nexus 6 waxay hoos u dhigeysaa qiimaheeda € 459
Google ayaa hoos u dhigtay qiimaha Nexus 6 ilaa 459 29 ka hor imaanshaha aaladaha cusub ee Nexus ee la soo bandhigi doono XNUMX-ka bisha Sebtember.
Meizu MX5 Pro ayaa laga soo qaaday soo bandhigidiisa
Muxuu noqon doonaa calanka xiga ee shirkadda Shiinaha, Meizu MX5 Pro, looma ilaalin daadinta cusub.
Alcatel wuxuu soo bandhigayaa taleefanka biyaha lagu ciyaaro ee Go Play iyo wearable Go Watch
Xirasho iyo taleefan casri ah oo u muuqda shahaaddadooda IP67 oo bixisa iska caabbinta biyaha iyo boodhka lagu soo bandhigo IFA.
ZTE wuxuu ku dhawaaqayaa Axon Elite Yurub, Latin America iyo Aasiya
Axon Elite wuxuu leeyahay shaashad dhan 5,5-inch, Snapdragon 810 chip, 3GB oo RAM ah iyo 32GB oo ah 419 XNUMX. Motorola iyo kuwa kaleba ha gariiraan.
Alcatel wuxuu ku soo bandhigayaa kiniinkiisa 17-inch Xess ee IFA
Alcatel Xess waxaa lagu soo bandhigay IFA oo ah nooc ka mid ah kaas oo aan ka helno kiniin 17-inch ah oo doonaya inuu noqdo xarunta warbaahinta ee guriga.
Marka loo eego wararkii ugu dambeeyay, LG Nexus 2015 wuxuu ka hooseyn lahaa € 400
Macluumaad dheeraad ah ayaa soo socda oo ku saabsan mustaqbalka shirkadda LG, Nexus 2015. Sida ku xusan xanta ugu dambeysa, terminal-ka wuxuu ku kacayaa wax ka yar € 400.
Acer Liquid Z: boosteejooyinka cusub ee bartamaha-dhexe waxay yimaadaan IFA
Dhacdada IFA waxay keentay cusboonaysiinta dhowr terminaal, markay tahay Acer waxay soo bandhigeen noocyadooda cusub ee Acer Liquid Z.
Moto 360 jiilka 2aad, Motorola's smartwatch cusub
Qaabka cusub ee loo yaqaan 'Motorola smartwatch', Moto 360, ayaa lagu soo bandhigay IFA 2015 oo leh noocyo kala duwan oo aad u xiiso badan.
Moto cusub 360 iyo Moto 360 Sport
Motorola waxay soo bandhigtay dharkeeda cusub ee la gashado maalinta koowaad ee IFA. Moto 360 cusub oo leh laba cabir iyo nooc isboorti, Moto 360 Sport.
Kani waa Huawei G8 cusub
Shirkadda Huawei waxay ku dhawaaqday dhowr sheeko oo cusub maalintii ugu horreysay ee IFA 2015, oo ay ka mid tahay midka cusub ee Huawei G8, oo ah bartamaha-dhamaadka / dhamaadka-dhamaadka.
La kulan Huawei Watch, oo ah smartwatch € 399
Huawei Watch ayaa hadda loo heli karaa iibsi laga bilaabo maanta € 399 oo ah qaabkeeda aasaasiga ah isla markaana ka imanaya carwada IFA ee Berlin.
Dhammaan wixii ku saabsan Xperia Z5, Xperia Z5 compact iyo Xperia Z5 premium
Sony wuxuu noo keenayaa sedex ka mid ah taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Xperia phones' oo leh kamaradda ugu dhakhsaha badan autofocus-ka meeraha, dareeraha faraha iyo laba maalmood oo nolosha batteriga ah.
Kani waa Asus ZenWatch 2
Waxaan sii wadeynaa wararka laxiriira IFA-da Berlin si aan ugala hadalno ASUS-da cusub ee la xiran karo, ASUS ZenWatch 2.
Acer Predator 8 GT-810, ayaa soo bandhigay kiniinka cusub ee loogu talagalay cayaartoyda
Waxaan horay u aragnay qaar ka mid ah wararka, sida Mate S cusub oo ka socda Huawei haddana waa markiisii ​​Acer oo naga yaabisay intii ay soo bandhigeysay iyadoo muujineysa Acer Predator 8, oo ah kiniin lagu ciyaaro.
Apple's Force Touch wuxuu dhiirrigeliyaa shaashadaha Android: kiiska Huawei
Huawei waxaa dhiirigeliyay Apple Force Force si loo abuuro shaashad leh awood xasaasi ah oo ay kaga falceliso cadaadiska. Ma rabtaa inaad la kulanto?
Nexus cusub ayaa la soo bandhigi doonaa 29-ka bisha Sebtember
Sida laga soo xigtay macluumaadka ugu dambeeyay, mustaqbalka Nexus 2015 waxaa lagu dhawaaqi doonaa Sebtember 29.
Shirkadda Huawei ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday Mate S
Huawei wuxuu noo keenayaa taleefan heer sare ah oo leh shaashad 5,7-inji ah € 649, Mate S oo looga dhawaaqay IFA.
GIGASET ME, qeexitaannada iyo qiimaha khadka cusub ee casriga ah ee shirkadda Jarmalka
Dhamaan qeexitaanada farsamo ee khadka cusub ee GIGASET Smartphones, GIGASET ME.
Qoyska cusub ee qalabka Xperia Z5 waxaa lagu arki karaa sawirro
Sony waxay soo bandhigi doontaa qalabkeeda cusub inta lagu jiro IFA. Si kastaba ha noqotee, fashilka cusub ee qalabka Xperia Z5 waxaa lagu arki karaa sawirro
Huawei Mate S waxaa lagu arki karaa saddex midab
Qeybta xigta ee shirkadda fadhigeedu yahay Shiinaha, Huawei Mate S, ayaa lagu arkay saddex midab oo kala duwan ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin.
Moto 360 2015 cusub ayaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 8
Soo saaraha Mareykanka ee Motorola wuxuu ahaa mid aad u firfircoon xilliga xagaaga. Waxaan aragnay sida ay u soo bandhigtay saddex taleefan gacmeed ...
Dib-u-eegista iyo falanqaynta Oneplus 2
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib-u-eegidgan iyo falanqaynta dhammaystiran ee Isbaanishka ee Oneplus 2, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la filayo sannadka.
Samsung Gear S2 oo muddo dheer la sugayay ayaa halkan jooga
Samsung waxay noo keentay Gear S2 hoosta Tizen iyo laba nooc oo kala duwan oo naqshadeynta ah, mid ka sii casrisan iyo mid casri ah oo shaashad yar oo wareeg ah.
LG Nexus 2015 oo leh 3 GB oo RAM ah, Snapdragon 808 iyo 2700 Mah
Xanta cusubi waxay umuuqataa qeexitaanada mustaqbalka ee 2015 Nexus terminal ay soosaartay LG.
Xiaomi Mi Pad 2 wuxuu ku dari lahaa Dual Boot iyo processor Intel
Mustaqbalka Xiaomi Mi Pad 2 wuxuu ku biiri karaa SoC ay soo saartay Intel waxayna noqon laheyd Dual Boot.
Dib u eeg Iradish X9 Y6, Apple Watch Clone Bluetooth Smartwatch oo aan ku heli karno wax ka yar 30 euro
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegista Isbaanishka ee Iradish X9 Y6, oo ah isku xirka dhabta ah ee Apple Watch oo aan ku heli karno wax ka yar 30 Euros
Fiidiyowga xaday wuxuu muujinayaa Sony Xperia Z5 Premium oo leh bandhig 4K oo dhan sharaftiisa
Sony Xperia Z5 Premium waa ku darista cusub ee soosaaraha Japan si loo siiyo isticmaalaha xalka ugu sarreeya ee suurtogalka ah shaashadda oo leh 4K
LG Watch Urbane Luxe, oo ah 23-karat dahab smartwatch ah $ 1.200
Daabacaad gaar ah oo LG Watch Urbane ah ayaa la timid daabacaadda Luxe oo wadata 23 karat oo dahab ah iyo qiimo dhan 1.200 oo doollar oo loogu talagalay 500 oo unug.
Ma rabtaa sharaf ka jaban 7? Ilaa 31 Ogosto waxay ku kacaysaa 300 euro!
Honor wuxuu soo saaray xayaysiin aad u xiiso badan oo ku saabsan Sharafta 7. Hadaad rabto inaad iibsato Sharaf 7 raqiis ah bakhaarkooda waxay ku iibinayaan 300 euro ilaa 31 Ogosto.
Sawirradii ugu horreeyay ee Nexus 8 loo malaynayo inay muuqdaan
Sawiradii ugu horreeyay ee kiniin cusub oo Google ah, Nexus 8, ayaa soo muuqday.
Samsung waxay sii wadaa istiraatiijiyaddeeda si ay uga guuleysato dadka isticmaala Android.
Samsung ayaa bilawday barnaamij cusub oo ay ku doonayso inay ku qanciso milkiilayaasha iphone inay aadaan mid ka mid ah Galaxy-da cusub Waxaan si fiican u falanqeyneynaa.
Soo bandhigida Nexus 5 2015 waxay noqon kartaa Sebtember 29
Xanta cusub ee ka socota Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegeysa in soo bandhigida Nexus 5 2015 ay imaan karto Sebtember 29.
Isbarbardhiga Doogee Valencia 2 Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X iyo tijaabada xawaaraha
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhiga iyo tijaabada xawaaraha Androidsis ee udhaxeysa Doogee Valencia Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X
Maamuus 7, dareenkii ugu horreeyay ka dib markii lagu soo bandhigay London
Sharafta 7 ayaa horey loo soo bandhigay. Oo waxaan kuu soo qaadaneynaa dareenkayagii ugu horreeyay ka dib tijaabinta calanka cusub ee Sharafta. Miyaad seegaysaa?
Dib u eeg Doogee Nova Y 100X, Quad Core Lollipop oo ka yar 80 Euros
Falanqeyn iyo dhameystir Dib u eegis Doogee Nova Y 100X, oo ah terminal xasaasi ah oo Android ah oo aan ku heli karno wax ka yar 80 Euros.
Sony ayaa si qalad ah udaadiyey qeexitaanada Xperia Z5
Shirkadaha caalamiga ah ee Jabbaan, Sony, ayaa si qalad ah u kashifay dhammaan tilmaamaha Xperia Z5, Xperia Z5 Plus iyo Xperia Z5 Compact.
Moto 360 2015 waxaa lagu arki karaa sawirro
Sawirro cusub oo mustaqbalka Motorola smartwatch ah ayaa soo muuqda, Moto 360 2015. Smartwatch-kan cusub wuxuu yeelan doonaa laba nooc oo ku xiran cabirkiisa.
Obi Worldphone, oo ah sumcadda maamulihii hore ee Apple John Culley ayaa soo bandhigaysa labadeeda taleefan ee ugu horreeya
Obi Worldphone waa sharad shirkad muddo dheer jirtay oo Apple ah oo bilaabi doonta laba terminaal suuqyada soo kordha qiimo jaban iyo naqshad weyn.
Galaxy Grand On iyo Mega On, boosteejooyin cusub oo Samsung ah
Xog cusub oo laga helay shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriyada Koonfureed, waxay ku hadlaysaa inay soo bandhigi karto boosteejooyin cusub, oo hoos imanaya magacyada Grand On iyo Mega On.
Ma iibsan lahayd dahab Galaxy Note 5 ah?
Terminal-ka cusub ee Samsung ayaa hadda suuqa soo galay waxaana horay u soo muuqday nooc dahab ah oo ka tirsan Galaxy Note 5. Ma iibsan lahayd dahab Galaxy Note 5 ah?
Telefoonada casriga ah ee ugu fiican Android ee la ciyaaro
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha ku saabsan aaladaha moobaylka, maanta waxaan kuu soo qaadanaynaa xul ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee casriga ah ee Android in aad ciyaarto
Sharafta 7 ayaa hadda diyaar u ah inay ka degto Yurub
On 27 Ogosto, Honor wuxuu soo bandhigi doonaa nooca Yurub ee Honor 7, oo ah calanka cusub ee shirkadda Huawei
Qeexitaanka cusub ee Nexus 5 waa la sifeeyey oo ka duwan kuwa ilaa hadda la yaqaan
Google Nexus 5 ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar wuxuuna la imaan doonaa cusbooneysiinta cusub ee Android 6.0 Marshmallow.
Wada-hawlgalayaasha Cyanogen iyo WileyFox si ay u soo bandhigaan laba taleefannada casriga ah ee Yurub, Afrika iyo Bariga Dhexe
Cyanogen waxay iskaashi la leedahay WilleyFox oo soo saari doonta laba taleefannada casriga ah oo heer dhexe ah oo wata qalab wanaagsan iyo qiimo jaban.
HTC Aero waxay umuuqataa mid lamid ah iPhone 6
Mustaqbalka loo maleynayo inuu yahay soo saaraha Shiinaha, HTC Aero, wuxuu yeelan karaa naqshad aad ula mid ah iPhone 6-ka hadda jira.
Samsung waxay ku shaqeyn laheyd kiniin Android ah oo leh 18,4 inji
Soosaaraha Kuuriyada Koonfureed Samsung waxay soo saari kartaa kiniin caqli badan oo 18,4 inji ah.
Samsung waxay ka jawaabtaa dhibaatooyinka S Pen ee Galaxy Note 5
Samsung waxay ka jawaabaysaa dhaleecaynta ka dhalatay dhibaatooyinka S Pen ee terminal-ka cusub, ee Galaxy Note 5, cillad naqshad awgeed.
Waa maxay taleefanka ugu yar ee Android ee suuqa yaalla? Elephone Mini waa jawaabta
Ka hor taleefannada casriga ah waxay ahayd muhiim in cabirka taleefanka uu yaraa. Ma rabtaa inaad la kulanto moobilka ugu yar ee Android? Waa Elephone Mini.
Nexus 8 oo leh 8 geesood ayaa ka muuqda halbeeg
Qiyaas ahaan 8-inch oo kiniin ah ayaa soo muuqday. Kaniinkan oo loo maleynayo inuu yahay 8-inch ayaa la imaan doona GP-ga 8-gees ah.
Taleefanka casriga ah ee Cyanogenmod ayaa hadda laga heli karaa Shiinaha isla markaana si dhakhso leh ugu socdaa Yurub qiimo aan caadi ahayn
Waxaan horey u haysanay Cyanogenmod's Smartphone, ZUK Z1 oo ay soosaartay Lenovo, oo lagu heli karo ka hor iibin qiimo aan caadi aheyn.
Samsung Galaxy Note 5 wuxuu leeyahay cillad nashqadeysan oo si joogto ah u dhaawici karta
Samsung dhibaato ayaa ka haysata S Pen oo ku jirta Galaxy Note 5 sidaa darteed waxay u baahan tahay inay si uun u daawayso ka hor intaysan Yurub gaarin
Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo darawallada Android ee Samsung, LG, Sony iyo Huawei
Maanta waxaan ku siineynaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee la heli karo si loogu rakibo darawallada Android ee Samsung, LG, Sony iyo Huawei
Nexus Huawei wuxuu ku dari karaa Snapdragon 810
Shirkadda Nexus ee Huawei waxay ku dari kartaa nooca 2.1 ee Snapdragon 810 halkii ay ka ahaan lahayd processor-ka cusub ee ay soo saartay shirkadda Qualcomm, Snapdragon 820.
[APK] Soo degso oo ku rakib widget-ka cimilada Galaxy S6 Android kasta
Maanta waxaan idinla wadaageynaa dhamaantiin widget cimilada Galaxy S6 iyo qaabkeeda rakibida si aad ugu raaxeysan kartaan goob kasta oo ka mid ah qalabka Android.
Nexus-ka Huawei waxaa lagu arkay sawirro cusub oo xaday
Nexus-ka soo socda ee Huawei waxaa lagu arki karaa sawirro cusub oo xaday, oo muujinaya muuqaalkiisii ​​ugu dambeeyay ee bannaanka ka sameysan bir.
Samsung Galaxy Note 5 iyo S6 Edge Plus arrimo badan
Dhibaatooyin cusub oo la soo dersay Samsung Galaxy Note 5 iyo S6 Edge Plus oo badan, oo ah shaqo badan oo xad gudub badan.
ASUS waxay billowday nooc gaar ah oo Zenfone 2 ah oo ku yaal Brazil oo leh 256GB oo keyd ah
ASUS waxay ka bilaabi doontaa Brazil nooc gaar ah oo ah Zenfone 2 oo leh 256 GB oo ah keyd gudaha ah oo u qaadanaya taleefankan casriga ah caqabadaha kale.
LG wuxuu ku dhawaaqay G Pad II 10.1 oo leh Snapdragon 800 chip, 2GB RAM iyo xalka 1920 × 1200
Carwada IFA ayaa noqon doonta munaasabada ay soo saaraha Kuuriyada LG ay ku soo bandhigi doonaan wax soo saarkooda cusub, kiniiniyada G Pad II 10.1 oo ay la socdaan Snapdragon 800 chip iyo 2GB RAM.
Chromecast waa aaladda labaad ee ugu iibinta badan Maraykanka
Qalabka Google ee Chromecast ayaa ah mid ku dhuftay Mareykanka, isagoo noqday aaladda labaad ee ugu iibinta badan.
OnePlus 2 wuxuu helayaa cusbooneysiinta OTA si loogu hagaajiyo Stagefright
OnePlus 2 wuxuu ku helayaa cusbooneysiintiisii ​​ugu horreysay iyada oo loo marayo OTA si loo xalliyo daloolka weyn ee ku yaal Android, Stagefright.
Sawirka ugu horreeya ee xayeysiinta ee loo yaqaan 'Xperia Z5 Compact'
Sony waxay ku soo bandhigi kartaa inta lagu gudajiray IFA 2015 magaalada Berlin terminal cusub, oo ah Xperia Z5 Compact, kaas oo sawirkiisii ​​ugu horreeyay ee xayeysiinta horeyba loo sii daayay.
Fikradda fikradda ee Huawei Nexus, ma jeclaan lahayd inay sidan noqoto?
Fiidiyow feker ah ayaa muujinaya sida Nexus-ka Huawei u ekaan lahaa. Ma jeclaan lahayd inuu sidan noqdo
Blackberry Venice, oo ah Blackberry-kii ugu horreeyay ee wata Android, wuxuu leeyahay taariikh iyo sawirro rasmi ah
Blackberry waxay ku sharraxeysaa Android waxayna abuurtaa taleefan casri ah oo leh nidaamkan hawlgalka sida caadiga ah. Astaamaha qaarkood iyo taariikhaha sii deynta waa la ogyahay.
Sony waxay ku dhawaaqeysaa SmartBand 2 oo la xiran karo
Sony SmartBand 2 ayaa ka taxadari doonta duubista dhammaan howlaha maalinlaha ah aaladda yeelan doonta, iyadoo ay ku jirto xaalad adag, shan maalmood oo nolosha batteriga ah.
Sharaf 7i oo leh kamarad wareegaysa oo si rasmi ah loo soo bandhigay
Maamuusku wuxuu soo bandhigay taleefankiisii ​​ugu dambeeyay, Honor 7i. Taleefanka gacanta oo ay ku jiraan kamarad wareegaysa 13 Megapixel.
Samsung Galaxy S6 Edge, tani waa waayo-aragnimadayda bil kadib isticmaalkeeda
Waxaan tijaabinay Samsung Galaxy S6 Edge muddo bil ah waana kuwan gabagabadii
ASUS si loogu soo bandhigo casriga iyo smartwatch-ka IFA 2015
Asus waxay ku dhawaaqday shir jaraa'id bisha Sebtember 2 ee soo socota iyada oo ku saabsan qaabka IFA ee Berlin.
Galaxy Note 5 ma yimaado Spain Waxaan kuu keenaynaa tijaabadii ugu horeysay ee hoos u dhaca!
Samsung ayaa ku dhawaaqday in Galaxy Note 5 cusub aan lagu soo bandhigi doonin Yurub ama Mareykanka Waxay ku sii jirtaa suuqa Aasiya halkaasna waxaa ka imanaya tijaabadii ugu horeysay ee hoos u dhaca.
HTC O2, calanka soo socda ee HTC ma loogu yeedhi doonaa taas?
Xog la helay ayaa sheegeysa in calaamadda cusub ee HTC loo bixin doono HTC O2 isla markaana ay aluminium u hayn doonto aaladda qalabka.
OnHub, sharad sida router Google
Google wuxuu bilaabayaa OnHub router-ka kaas oo gebi ahaanba u heellan isku xirnaanta wireless-ka inkasta oo uu leeyahay astaamo kale oo xiiso leh.
Taleefanka taleefanka gacanta ee 2-da loo yaqaan ee horay loo dalbaday, waxaa la sii deyn doonaa bisha Sebtember
Sebtember waa bisha la bilaabi doono taleefanka cusub ee loo yaqaan 'Blackphone 2', oo ah terminaal u dooda nabadgelyada iyo arrimaha gaarka ah
Fosil waxay muujineysaa barnaamijkeeda casriga ah ee loo yaqaan 'Android Wear smartwatch' oo ay ku shaqeyso Intel chip
Nooca dharka loo yaqaan 'Fosil' wuxuu adeegsadaa shirka soosaaraha Intel si uu u soo bandhigo barnaamijkiisii ​​ugu horreeyay ee Android Wear smartwatch.
Samsung waxay xaqiijineysaa ballankeeda IFA 2015: Sebtember 3
Waa la heesay, horeyba way u yarayd IFA 2015, markaa shirkado badan ayaa bilaabaya inay wacaan saxaafadda, sida ku dhacday Samsung.
Speedo Shine, Misfit ayaa loo xiraa biyaha dabbaasha
Speedo Shine waa dharka saxda ah ee lagu duubi karo dhammaan dhaqdhaqaaqa jireed ee aan ku sameyno barkadda dhexdeeda. Biyaha quusin karo ilaa 50 mitir.
Motorola Moto 360S iyo 360L waxay sii maraan FCC-da Brazil
Laba aaladood oo cusub oo layaableh ayaa ka gudbay kontaroolada tayada ee reer Brazil iyaga oo hoos imanaya magacyada 360S iyo 360L. Miyay noqon doontaa Moto 360S cusub iyo Moto360L?
NUCLUN 2, LG ee SoC cusub ayaa ka awood badan Samsung Exynos 7420
Jaangooyooyinkii NUCLUN 2 ayaa soo ifbaxay, SoC-ka cusub ee soo saaraha LG kaas oo uu damacsan yahay inuu kula tartamo Samsung noocyadiisa kala duwan ee Exynos.
Samsung waxay soo bandhigeysaa qalabkeeda cusub: Galaxy O
Samsung wali waxay dooneysaa inay balaariso qalabkeeda kala duwan sidaas darteedna waxay soo bandhigi doontaa noocyo cusub, Galaxy O.
Xiaomi waxay jabinaysaa rikoorro mar kale iyadoo 800.000 oo unug oo ka tirsan Redmi Note 2 lagu iibiyey 12 saacadood
Xiaomi ayaa markale sameysay iyadoo 800.000 oo unug laga iibiyay Xiaomi Redmi Note 2 12 saacadood gudahood. Rikoor cusub oo soo saaraha Shiinaha ah.
Sawirkii ugu horreeyay ee Google Nexus 5 cusub ayaa la sifeeyay
Sawirkii ugu horreeyay ee waxa uu noqon doono Google Nexus 5 cusub ee sanadkan ayaa la shaaciyay. Taleefan muddo dheer la sugayay oo adeegsadayaal badan ah.
Xperia Z5 Plus, shaashadda 4K iyo dareeraha faraha
Macluumaadka ayaa si qarsoodi ah looga helay qalabka cusub ee Sony, ee loo yaqaan 'Xperia Z5 Plus'. Terminal yeelan doona shaashad 4K ah iyo dareeraha sawirka faraha.
Tani waxay noqon doontaa Huawei Nexus
Waxaan sii wadaynaa daadinta iyo maanta waa inaan ka hadalnaa mustaqbalka Huawei Nexus.
New Samsung Galaxy S6 Edge Plus, miyuu cabirku dhab ahaantii muhiim u yahay?
Dhowr maalmood ka hor ayaa la soo bandhigay Samsung Galaxy S6 Edge Plus cusub, oo ku dhowaad mataan ah Edge laakiin leh cabbir ka ballaaran.
Motorola miyuu seegay Moto 360 cusub?
Moto 360 cusub ayaa la soo bandhigi doonaa bilaha soo socda, in kasta oo ay u muuqato in Motorola ay leedahay warqad siib ah oo la baray sida loo malaynayo in la xidhan karo.
Fiidiyowga xaday ee Nexus cusub 2015
Waxaa rajeynaya isticmaaleyaal fara badan, Nexus 2015 ayaa la soo bandhigi doonaa bilaha soo socda, laakiin looma dhaafin daadinta waxaana ku arki karnaa fiidiyoow.
Tani waa Gear S2, Samsung wareega smartwatch
Shalay galab waxay ahayd maalintii la soo bandhigayay terminalka cusub ee Samsung, Galaxy Note 5 ...
Xiaomi waxay si rasmi ah u soo bandhigaysaa Redmi Note 2
Xiaomi waxay si rasmi ah u soo bandhigtay shaygeeda cusub, ee loo yaqaan 'Redmi Note 2.' Waa mid dhexdhexaad ah oo wax badan ka hadli doona.
Kani waa OnePlus 2 gudaha mahadnaqa iFixit
IFixit, oo ah shirkad ku takhasustay kala goynta taleefannada gacanta, ayaa gebi ahaanba kala furfurtay OnePlus-ka cusub 2. Ma dooneysaa inaad aragto sida uu u eg yahay gudaha OnePlus 2?
Samsung Galaxy Note 5 looma qaybin doono Yurub
In kasta oo ay u muuqato warar aan caadi ahayn, Samsung Galaxy Note 5 looma qaybin doono Yurub dhexdeeda iyada oo kaliya lagu dhejinayo Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Isbarbardhiga Galaxy S6 Edge VS Galaxy S6 Edge +
Maanta waxaa la soo bandhigay Galaxy S6 Edge Plus cusub. Horumar noocee ah ayey keeneysaa? Ha moogaan isbarbardhigga Galaxy S6 Edge iyo S6 Edge Plus.
Isbarbardhiga Galaxy Note 4 VS Galaxy Note 5
Maanta ayaa la soo bandhigay jiilkii shanaad ee Samsung Galaxy Note 5 cusub. Maxay horumar ku soo kordhisay iyadoo la tixgelinayo jiilkii hore?
Samsung Galaxy S6 Edge + ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Samsung Galaxy S6 Edge + horay ayaa loo soo bandhigay. Kuwani waa dhammaan qarsoodiga taleefanka cusub ee Samsung ee qalooca
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy Note 5
Samsung waxay ku dhawaaqeysaa Galaxy Note 5 cusub oo xambaarsan khadad naqshadaysan oo lamid ah Galaxy S6. Way yar tahay casriga weyn laakiin aan lahayn kaarka microSD.
Maxaa Xiga?: Sida loo raaco xirmada Samsung Galaxy Note 5 oo nool
Ma rabtaa inaad si toos ah u aragto Samsung Galaxy Note 5 Unpacked? Laga soo bilaabo Androidsis waxaan kuugu haynaa kursi doorbid ah oo adiga laguu qoondeeyay.
Hadda waxaad iibsan kartaa OnePlus 2 casuumaad la'aan
Ma dooneysaa inaad iibsato OnePlus 2 casuumaad la'aan? Everbuying horeyba waxay ugu laheyd keydka dhoofinta degdegga ah ee kharashka dhoofinta lagu daro iyo in ka badan qiimaha tartanka
Huawei Mate 7s ayaa la soo bandhigi doonaa inta lagu jiro IFA 2015
Shirkadda Huawei waxay haysaa sheeko cusub oo loo qorsheeyay IFA 2015-ka magaalada Berlin. Mid ka mid ah waa terminaalka xiga, Huawei Mate 7s oo lagu soo bandhigi doono carwada.
Nexus 5 qeexitaankiisa ayaa xaday: jirka birta ah, shaashadda 5,2,, aftahannada hore, dareeraha faraha iyo USB Type-C
LG Nexus 5 wuxuu ku socdaa horumar oo wax yar oo ka mid ah wararka la xiriira ayaa soo baxaya, markan waxay ku egtahay qeexitaannada.
ZUK Z1, casriga Aasiyaanka leh 3 GB oo RAM ah iyo Snapdragon 801
Shirkad cusub oo ka socota Shiinaha ayaa noo soo bandhigeysa Terminal cusub oo awood leh oo qiimo jaban ku kacaya, waa ZUK Z1.
LastPass wuxuu noqdaa bilaash laakiin waa inaad lacag bixisaa si aad uga bedesho taleefan una aad u noqoto kiniin ama PC
LastPass waa bilaash, in kasta oo haddii aad rabto inaad ka tagto taleefan illaa kiniin / PC waa inaad lacag bixisaa.
Tani waxay noqon kartaa taleefankii ugu horreeyay ee Huawei ah oo leh shaashad qafiif ah
Huawei wuxuu soo bandhigi karaa bilaha soo socda waxa uu noqon lahaa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee leh shaashad qaloocan taariikhda.
Telefoonkani ma noqon doonaa Huawei Ascend Mate 7 Plus ama 7 Mini?
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in taleefanka cusub ee soo maray AnTuTu uu yahay Huawei Mate 7 Plus ama Huawei Mate 7 mini
Dhowr shaah oo Sharafta 7i ah ayaa soo daatay
Waxaan horey u ogaanay magaca taleefanka loo yaqaan 'Honig enigmatic Honor phone' oo leh kamarad iskeed u socota: Honor 7i
Telefoon Samsung ah oo xasaasi ah ayaa gaaraya 95.972 dhibcood AnTuTu. Samsung Galaxy S7 oo leh Snapdragon 820?
Telefoon Samsung ah oo wareersan ayaa ku guuleysta dhibco aad u wanaagsan AnTuTu. Ma noqon doonaa Samsung Galaxy S7?
Sawirro cusub oo xaday Samsung Galaxy Note 5 iyo Galaxy Edge +
Sawirro taxane ah oo cusub ayaa lasoo daadiyay oo muujinaya qaabeynta Samsung Galaxy Note 5 iyo Galaxy Edge +
Daadinta gudaha waxay muujineysaa tijaabooyinka waxqabadka ee Samsung Galaxy S7: Snapdragon 820 iyo Android M hoosta gacanta
Daadinta dukumiinti Samsung ah oo gudaha ah ayaa muujinaya Samsung Galaxy S7 oo lagu tijaabinayo Snapdragon 820 SoC
Saacadda Samsung ee soo socota, Gear A, waxay yeelan doontaa saddex nooc
Daawashada wareega xiga ee Samsung, midka loo yaqaan Gear A, wuxuu yeelan doonaa saddex nooc
MIUI 7 waxaa la bilaabi doonaa Ogosto 19
Xiaomi waxay soo bandhigi doontaa nuuca cusub ee nidaamka qalliinka iyadoo lagu saleynayo Android Lollipop, MIUI 7, Ogosto 19.
Huawei wuxuu leeyahay taleefan casri ah oo loo diyaariyey IFA oo aan ahayn Mate 8
Qof kastaa wuxuu rajeynayaa Huawei inuu soo bandhigo Mate 8 cusub inta lagu gudajiray IFA ee soo socota, laakiin si kastaba ha noqotee, soo saaraha Shiinaha ayaa qalab kale u keeni doona carwada.
Xiaomi Redmi 2 Prime ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay
Xiaomi ayaa soo bandhigtay maanta, waa maxay taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee gebi ahaanba laga soo saaro Hindiya, Redmi 2 Prime.
Qeexitaannada qaar ee Xiaomi Redmi Note 2 ayaa xaday
13-ka Ogosto, Xiaomi waxay dadweynaha u soo bandhigi doontaa terminal cusub, Xiaomi Redmi Note 2.
Sawirro badan oo xaday oo ah Xusuusin 5 iyo S6 Edge Plus
13-ka Ogosto, Samsung waxay soo bandhigi doontaa Samsung Galaxy Note 5 cusub, oo la dusiyay, mar kale iyo S6 Edge Plus.
Kiniiniga Nokia N1 ayaa ugu dambeyn yimid Yurub
Waxaan ugu dambeyntii ka iibsan karnaa Nokia N1 Yurub. Kiniiniga cusub ee Nokia ayaa ku kacaya qiimo dhan 314 euro oo lagu daray 20 euro oo ah qiimaha dhoofinta
Meizu MX5 Pro wuxuu isku dari karaa processor Exynos 7420
Dhamaadka Juun waxaan ku tuseynaa Meizu MX5, astaanta cusub ee soo saaraha Aasiya. Ilaa Meizu MX5 Pro la soo bandhigo. Waana in yar yar siraha cusub ee Meizu titan ee soo socda la kashifayo. Ugu dambeeyay? In Meizu MX5 Pro uu kori karo processor Exynos 7420.
Shaqada laga ceyrinayo shaqsiyadeed ayaa durbadiiba ku dhacday HTC
HTC horey ayey u laheyd qorshe shaqo ka fariisin si loo yareeyo shaqaalaha loona badbaadiyo shirkad leh mustaqbal sii kordheysa oo mustaqbalkiisu sii yaraanayo.
Marabtaa inaad iibsato raqiis HTC One M9? Hagaag, Ebay waxay ku iibiyaan wax ka yar 450 euro
Haddii aad raadineyso wado aad ku iibsato raqiis HTC One M9 ha u eegin meel dheer: dhanka Ebay waxaa laga heli karaa 445 euro
Dukaanka Bariga Dhexe ayaa sifeeya dhammaan astaamaha farsamo ee Galaxy Note 5 iyo S6 Edge +
Jariir, oo ah dukaan internetka ah oo lagu iibiyo Bariga Dhexe, ayaa daabacay xayeysiis taxane ah oo muujinaya ...
Xiaomi wali waa Boqorka iibka Shiinaha
Ma jiro qof kala saari kara Xiaomi. Soo saaraha Shiinaha ayaa wali ah boqorka iibka ee Shiinaha.
HTC waxay sii deysaa warbixin cusub oo maaliyadeed. Xalka? jiil cusub oo casriga ah oo soo jiidasho leh
Iibinta HTC waxay bilaabeen inay noqdaan kuwo xun. Soosaaraha Taiwan ayaa galay qasaaro gaareysa 252 milyan oo doolar.
Shirkadda Nexus ee loo maleynayo in ay leedahay shirkadda Huawei ayaa ka muuqata muuqaalka
Daadadku waxay naga dhigayaan inaan wax aragno ka hor intaysan dhicin Waxaan dhamaanteen rajeyneynaa Huawei Nexus sanadkan oo sida muuqata lagu soo duubay fiidiyowga.
Istaraatijiyadaha iibinta cusub: OnePlus 2 ayaa loogu talagalay xaraashka 'Ebay' ee sadaqada
Martiqaadyada la dhaleeceeyay ee OnePlus waxay raadsadeen hab ay sifiican iskaga iibiyaan iyada oo ay ugu wacan tahay xaraashka sadaqada ah ee Ebay ee OnePlus 2
OnePlus 2 wuxuu ku iibiyaa Shiinaha kaliya 1 daqiiqo
OnePlus 2 waxaa loogu yeeray inuu noqdo mid ka mid ah boosteejooyinka sanadka isla markaana Shiinaha waxaa lagu iibiyay kaliya 1 daqiiqo.
Sony Xperia Z5 iyo Z5 Compact waxay lahaan doonaan dareeraha sawirka faraha
Sawirada cusub ee xaday ee Sony Xperia Z5 Muuji Sensor Fingeror oo ah dhinaca Calanka Soo socda ee Sony
Shaandheeyay sawirro cusub oo Samsung Galaxy Note 5 ah
Mid ka mid ah terminaallada aan sugeyno 2015 waa Galaxy Note 5.
Maamuusku wuxuu gacmihiisa ku hayaa taleefan casri ah oo kamarad lagu sawiro ah
Shirkadda 'Huawei-sub-brand' oo si gaar ah loogu talagalay Yurub, Honor, ayaa haysa qalab leh kamarad iskeed u socota
Samsung Galaxy S4 Mini Plus ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Si qarsoodi ah, shirkadda Kuuriya waxay si rasmi ah u soo bandhigtay terminal cusub, waa Samsung Galaxy S4 Mini.
Tani waxay noqon kartaa Nexus 5 2015
Waxaa jira wax yar oo ka harsan helitaanka taleefanka gacanta ee xiga ee Google oo ay soo saartay LG, Nexus 5 2015.
OnePlus wuxuu diyaarinayaa taleefan casri ah oo saddexaad oo soo bixi doona ka hor dhamaadka sanadka, OnePlus Mini?
Shirkadda Shiinaha ee OnePlus ayaa gacanta ku heysa taleefan casri ah oo seddexaad dhamaadka sanadka, ma waxay noqon doontaa xanta lagu sheekeysto ee OnePlus Mini?
Galaxy Note 5: astaamaha uu shaaca ka qaaday Evleaks
Evleaks wuxuu daaha ka rogay waxa ay noqon karaan astaamaha Galaxy Note 5. Waxaan dib u eegeynaa maanta.
Maamuus 6 Plus, oo ah jaantus heer sare ah oo ka yar 400 euro
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan Honor 6 Plus, oo ah fure cusub oo heer sare ah oo Honoor uu doonayo inuu ku jabiyo suuqa qiimaha adag: € 399
Samsung Galaxy J2 waxay muujineysaa astaamaha nolosha
Beddelka Galaxy J1 wuxuu ku dhow yahay geeska. Waad ku mahadsan tahay tijaabada xaday waxay xaqiijineysaa astaamaha Samsung Galaxy J2 ee soo socda.
Samsung waxay xaqiijineysaa in smartwatch-keeda xiga, Gear A, uu meerto noqon doono
Soo saaraha fadhigiisu yahay Kuuriyada Koofureed wuxuu xaqiijiyay in smartwatch-keeda xiga ee hoos taga Gear A uu noqon doono wareeg oo leh qaab wareeg ah.
OnePlus 2, "dilaaga calanka" cusub ayaa daboolka ka qaaday
The OnePlus 2 horey ayaa loo soo bandhigay iyada oo ay la socdaan dhammaan waxyaabaha cusub iyo maqaalkan waxaan ku falanqeyn doonnaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Beddelka Moto G3, qeexitaannada iyo qiimaha ka wanaagsan
Kuwani waa beddelaaddayda 'Moto G3', shaashado ka fiican, processor-rada, RAM, xusuusta kaydinta gudaha iyo xitaa qiimo hoose
Isbarbardhiga u dhexeeya Moto G3 VS Doogee Valencia 2 iyo 100 Pro
Waxaan wajahaynaa Moto G3 VS Doogee Valencia 2 iyo 100 Pro xukunka boqortooyada bartamaha dhexe. Yaa ku guuleysan doona dagaalka?
Iibinta kiniinku waxay bilaabaysaa inay hoos u dhacdo, dhamaadka xumbada?
Iibinta kiniiniyada ayaa hoos udhaceysa sababtoo ah cabirka sii kordhaya ee shaashadaha casriga
Samsung ayaa hoos u dhigi doonta qiimaha Galaxy S6 iyo S6 edge
Iyadoo qaar ka mid ah tirooyinka aan fiicnayn ee iibka, Samsung ayaa hoos u dhigi doonta qiimaha Galaxy S6 iyo S6 gees. Tiro kooban dhawr maalmood ka hor Dhacdadii aan la Xirin.
Lagu sifeeyay dhabarka Nexus cusub 5
Waxaan horeyba ugubilawnay kutiri kuteenta iyo daadinta, kiiskan gadaal la sheegay ee Nexus 5 waxaa siidaysay OnLeaks.
Qualcomm Wipower waxay keeneysaa lacag la’aan fiilooyin ah taleefanada jirka ee biraha iyo kiniiniyada
Mid ka mid ah dhibaatooyinka taleefannada casriga ah ee isku darsama jirka birta ah ayaa ah inaysan isticmaali karin xarkaha siligga siligga ah: xubnahooda birta ah ayaa kululaan lahaa, waana sababta illaa iyo hadda aysan suuragal u ahayn in la isticmaalo nidaamkan. Nasiib wanaag Qualcomm ayaa la timid WiPower-keeda.
In kabadan 750.000 boos celin ah oo loogu talagalay OnePlus 2
Horey waxaa ujiray in kabadan 750.000 oo boos celis ah OnePlus 2, taleefan kafiican guusha guusha qaabka koowaad ee OnePlus
Sony waxay soo bandhigi kartaa Xperia Z5 + bisha Maarso
Xanta cusubi waxay soo jeedineysaa in Sony ay soo bandhigi karto Xperia Z5 + bisha Maarso. Terminal u istaagi doona astaamahiisa awooda badan.
Lenovo Vibe P1, taleefan leh batari 5.000 mAh ah
Sawirkii ugu horreeyay waa la dusay, oo ay weheliso astaamaha farsamo ee Lenovo Vibe P1, xarunta cusub ee Lenovo ee leh batari 5.000 Mah ah
Jiilka labaad ee Moto 360 wuxuu maraa FCC
Dad badan ayaa filayay Motorola inay soo bandhigto jiilka labaad ee smartwatch, Moto 360, intii lagu jiray dhacdadii shalay.
Cube I7 Remix OS: Kuwani waa aragtideyda ka dib laba toddobaad oo si xoog leh loo isticmaalay Kiniinka
Kadib markaan sifiican u tijaabiyay Tablet Cube I7 Remix OS kuwani waa kuwa aan si daacad ah udarsaday
Codsiyada muhiimka ah ee looxyada Android: Maanta CudaSign si aad si dijitaal ah u saxiixdo una buuxiso dukumiintiyada
CudaSign waa mid ka mid ah barnaamijyada lagama maarmaanka u ah Kiniiniyada 'Android Tablets' oo noo oggolaan doona inaan si dijitaal ah u saxeexno una buuxino dukumiintiyada si fudud.
Meizu M2 durba waa xaqiiqo iyo qiimo aan laga adkaan karin
Meizu M2 ayaa hada la soo saaray. Meizu-ka cusub ee bartamaha-dhexe wuxuu u taagan yahay qiimahiisa: Meizu M2 wuxuu ku kacayaa wax ka yar 100 euro